Atletisma – Mondiaux Juniors 2016 : hisolo tena an’i Dago Rakotoarimiandry Nomena | NewsMada
Atletisma – Mondiaux Juniors 2016 : hisolo tena an’i Dago Rakotoarimiandry Nomena
Rakotoarimiandry Nomena. Atleta malagasy milalao ao amin’ny klioba Sottevilles any Frantsa. Voasokajy hiatrika ny fiadiana ny tompondaka eran-tany eo amin’ny taranja atletisma, sokajy “juniors”. Fifaninanana hotanterahin’ny federasiona iraisam-pirenena (IAAF) any Bydgoszcz, Pologne, manomboka anio 19 jolay hatramin’ny 24 jolay.
Hifaninana ary hiaro ny voninahim-pirenena eo amin’ny taranjam-pifaninanana 400 m haies ity solontenantsika tokana ity. Raha ny fampitam-baovao, efa nanomana ny fiatrehana ity hetsika iraisam-pirenena andiany faha-16 ity i Nomena vantany vao avy niatrika ny fiadiana ny tompondakan’i Frantsa izy. Marihina mantsy fa tamin’ny alalan’ny vokatra azony nandritra ity hetsika farany no naha voasokajy azy. Izany hoe, nahazo ny “minima” hiatrehana ity hetsika goavana any Pologne ity ny tenany.
Ankoatra izay, tsy afaka nandefa solontena amin’io andiany faha-16 io avy eto an-toerana ny federasiona malagasy (FMA) noho ny tsy fahampian’ny hoenti-manana. Voalaza fa tsy nanome fanampiana amin’ny hiatrehana io fifaninanana any Pologne io ny minisiteran’ny Fanatanjahantena. Manampy izany koa ny fahasarotan’ny fakana “visa” ho an’ireo atleta avy eto an-toerana miampita any Pologne, sns.